Mangina ny hetsika Hirak ao Maraoka, kanefa mitohy ny famoretana ireo fampitam-baovao tsy miankina · Global Voices teny Malagasy
Mbola mifonja noho ny fitantarana hetsi-panoherana ny mpanao gazety
Voadika ny 09 Avrily 2019 5:14 GMT
Vakio amin'ny teny English, Shqip, Español, Français, Italiano, English
Ity tantara ity no faharoa amin'ny andiany fizarana roa momba ny famoretana ny fampitam-baovao sy ny “vaovao faikany” any Maraoka. Nosoratana niaraka tamin'ny fiarahamiasan'ny Access Now ny lahatsoratra. Azonao vakiana ato ny ampahany voalohany.
Nanomboka teo sy hatramin'ny taona 2017, nanao fihetsiketsehana isan-kerinandro ny Maraokana any amin'ny faritr'i Rif mba hanohitra ny fepetra ratsy ara-tsosialy sy ara-ekonomika sy ireo manampahefam-panjakana mpanao kolikoly, izay tsy noraharahian'ny governemanta foibe hatry ny ela, ary mbola nanohy ny fihetsiketsehana izy ireo raha tsy nanomboka famoretana feno herisetra tamin'ny volana jiona 2017 ny manampahefana, nisambotra mpikatroka sy mpanao fihetsiketsehana 400.
Migadra telo taona an-tranomaizina i Hamid El Mahdaoui, izay nitantana ny tranokalam-baovao Badil.info talohan'ny fisamborana azy rehefa nomelohin'ny fitsarana ambony ao Casablanca tamin'ny volana jona 2018 ho “tsy nahavita nitatitra heloka bevava mandrahona ny fiarovam-pirenena” taorian'ny resadresaka an-telefonina (fandraketana ofisialy azo tamin'ny fihainoana resaka an-telefaonina) teo aminy sy ilay mpikatroka manohitra ny tsy refesi-mandidy Maraokana monina any Holandy, izay nanoritsoritra drafitra hitondra fitaovam-piadiana ao amin'ny firenena ilay mpikatroka.
Efa nigadra herintaona i El Mahdaoui noho ny “fitarihana” ny fihetsiketsehana. Nosamborina tao an-tanànan'i Al-Hoceima izy tamin'ny 20 Jolay 2017 raha handeha hitantara ny fihetsiketsehana Hirak.
Migadra dimy taona an-tranomaizina kosa ilay mpanao gazety olon-tsotra, Mohamed El Asrihi, tonian-dahatsoratra sady talen'ny Rif24.com, tranonkala fampitam-baovao eo an-toerana izay nanome fitantarana goavana momba ny hetsi-panoherana tao Al Hoceima sy ny tanàna hafa. Io fitsarana io ihany no nanameloka azy tamin'ny volana jona 2018 noho ny “fanohintohinana ny filaminana anatiny ao Maraoka tamin'ny fandraisana fanomezana sy vola ho an'ny hetsika sy fampielezan-kevitra manohintohina ny firaisana sy ny fiandrianam-pirenena ao amin'ny fanjakan'i Maraoka, ary ny tsy fivadihan'ny olom-pireneny”, ary koa noho ny “fandraisana anjara tamin'ny fihetsiketsehana tsy nahazoana alalana”, “fitarihana fanoherana ny mahairaitsimivaky ny fanjakana”, “fanevatevana ireo manampahefana ao amin'ny governemanta, “ary “filazana tena ho mpanao gazety kanefa tsy manana fahazoan-dalana ilaina”.
Tsy nahazo fiarovana mitovy amin'ireo izay heverina ho “mpanao gazety matihanina” ireo mpanao gazety tsy nahazo fankatoavana — “karatry ny mpanao gazety matihanina” navoakan'ny Filankevi-Pirenena momba ny gazety, izay manaramaso ny indostria —. Mba hahazoana ny fankatoavana, mila manana mari-pahaizana momba ny asa fanaovan-gazety teny amin'ny oniversite ireo mpanao gazety. Ny asa fanaovan-gazety no tokony ho asa aman-draharahan'izy ireo voalohany sy ny loharanom-bolan'izy ireo voalohany, ary tsy tokony ho voaheloka noho ny heloka bevava tany aloha izy ireo. Tsy maintsy havaozina isan-taona ny karatra. Tsy mihatra amin'ireo olon-tsotra mpanao gazety izay mety tsy mampiasa ny asa fanaovan-gazety ho loharanom-bolany ireo fepetra ireo, tahaka izany koa ireo mpanao gazety izay tsy nahazo diplaoma na nianatra tany amin'ny oniversite.
Fa na dia ho an'ireo mpanao gazety izay heverina ho “matihanina” aza, dia voafetra ny fiarovana ara-dalàna. Tamin'ny taona 2016, nametraka fehezan-dalàna vaovao mifehy ny asa fanaovan-gazety izay nanafoana ny fanagadrana amin'ny sazy ny parlemanta Maraokana, saingy mbola afaka melohina amin'ny fandoavana onitra ireo mpanao gazety sy ny fampahalalam-baovao raha “manala baraka” ireo minisitry ny governemanta (andininy faha-81), ny diplaomaty vahiny (andininy 82), ary ireo andrim-panjakana sy mpiasam-panjakana (andininy 84). Ankoatra izay, mbola henjehina sy gadraina ny mpanao gazety noho ny fehezan-dalàna heloka bevava izay ahitana fanasaziana am-ponja sy/na fandoavana onitra ampiharina amin'ireo izay “manohintohina” ny finoana silamo, ny fitondram-panjaka, na mitarika hetsika mifanohitra amin'ny mahairaitsimivaky ny firenena.
Manakana ny fampitam-baovao tsy miankina tsy hanohitra ireo fanentanana fandisoam-baovao, indrindra ireo izay mikendry olona iharan'ny fandrahonana noho ny fikatrohany sy ny asan'izy ireo mandrakitra ny Hirak sy ireo hetsika hafa manan-danja amin'ny vahoaka ireo fepetra ireo.